माधव नेपाल अस्पतालमा भर्ना, कस्तो छ अवस्था — Imandarmedia.com
माधव नेपाल अस्पतालमा भर्ना, कस्तो छ अवस्था
काठमाडौ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अस्पताल भर्ना भएका छन् ।ज्वरो र खोकीको समस्या अत्यधीक बढेपछि उनलाई त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना भएका हो ।उनको निजि सचिवालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल ज्वरो र खोकीको समस्याका कारण त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना भएको जनाएको छ।
अहिले नेता नेपालको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ। चिकित्सकहरुले केही दिन आरामसहित उपचार गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले जानकारी दिएका छन्।अध्यक्ष नेपालको उपचारमा त्रि।वि। शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा. सन्तकुमार दास सहितको टोली संलग्न रहेको छ ।
उनको स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण अस्पतालमा भेटघाट बन्द गरिएको छ । नेपालको पीसीआर परीक्षण गर्दा दुवैजनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको उनले जानकारी दिए ।पार्टी गठनका लागि देश दौडाहमा हिडेका नेपाललाई धपेडि भएकाले स्वास्थ्यमा समास्या आएको हुनसक्ने डाक्टरको विश्लेषण छ ।उनी सहित उनकी श्रीमतिलाई उस्तै किसिमको लक्षण देखिएपछि कारोना परिक्षण गरिएको थियो । कोरोना रिर्पोट भने नेगेटिभ आएको थियो ।
यो पनि : मुटुलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, यस्तो छ डाक्टरको सल्लाह : छिल्लो समय नेपालमा मुटुरोगीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । योसँगै हृदयघातको संख्या पनि उतिकै छ । जसका कारण धेरैको ज्यान गएको छ। मुटुरोग विशेषज्ञहरूको सल्लाह मान्ने हो भने मुटुलाई केही हदसम्म स्वास्थ्य राख्न सकिन्छ।
यसरी स्वास्थ्य राख्न सकिन्छ मुटुलाई: मुटुलाई स्वास्थ्य राख्न विशेष गरी हाम्रो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले जंक फुड बढी खाने बानी बसेको छ। मासुजन्य खानेकुराहरू धेरै खाने बानी बसेको छ। अहिलेको व्यस्त जीवन शैलीले तनाव भइरहेको हुन्छ। अस्वस्थकर जीवनशैलीलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ।
अधिकांश मानिसहरूमा शरीरिक व्यायाम गर्ने बानी हुँदैन। दैनिक कम्तीमा आधा घण्टा शारीरिक व्यायम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। बिहान, दिउँसो बेलुका जुनसुकै समयमा गर्न सकिन्छ। यसो गर्नाले मुटु सुरक्षित रहन्छ।मुटुलाई विशेष गरी स्वास्थ्य राख्न खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ। मुटुको लागि अस्वस्थ खाना : जस्तै रातो मासु, कार्बाेहाइड्रेटयुक्त खाना नखाने, नुन र चिनीको मात्र कम गरे मात्रै पनि केही हदसम्म मुटु स्वास्थ्य हुन्छ।
हरियो सागपात, फ्रेस फलफूल, ओखर, बदाम, गाजरजस्ता खाने कुरामा बल गर्नुपर्छ। मासुको सट्टा माछा खाने बानी बसाल्नुपर्छ। दैनिक भिटामिन डीको लागि घाममा बस्ने बानी गर्नुपर्छ। मुटुलाई स्वास्थ्य राख्नु छ भने धुम्रपान र मद्यपान सेवन गर्नुहुँदैन। अत्याधिक मात्रमा धुम्रपान र मद्यपान गर्यो भने छोटो उमेरमै मुटुमा समस्या देखिन्छ। त्यसकारण धुम्रपान र मद्यपान सेवान गर्नुहुँदैन।
अहिले मानिसहरूको जीवनशैली निकै व्यस्त हुन थालेको छ । योसँगै विभिन्न कुराहरू मन खेल्छ । स्वस्थ्य मुटुका लागि चिन्ता लिने बानीबाट मुक्त हुनुपर्छ। चिन्ता र भयरहित जिन्दगी जिउने प्रयास गर्नुपर्छ।मुटु स्वास्थ्य राख्न हाम्रो दैनिकीमा पनि सुधार ल्याउन जरुरी छ। बेलुकी समयमै सुत्ने र समयमै उठ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। समयमा सुत्ने समयमा उठ्ने बानीले पनि मुटु स्वास्थ्य रहन्छ ।
यसकारण नियमित शारीरिक व्यायम गर्नुपर्छ। वर्षको एकपटक इसिजी गर्ने, कोल्ड स्टोर र सुगरको मात्रा कति छ भनेर जाँच गराउनुपर्छ । खानापान र विशेषज्ञसँग नियम सल्लाह लियो भने पनि हृदयघात हुनबाट जोगिन्छ। डा.अनिल भट्टराई त्रवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ हुन्।